စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ်ဆီ
လူငယ်ဘဝ အမှတ်တရလို့ ပြောလိုက်ရင် အမြဲပဲ မျက်စိထဲ ပြန်မြင်တဲ့အချိန်တွေဟာ အဖြူအစိမ်း ကျောင်းသူဘဝပဲဖြစ်နေခဲ့တာ အမှန်တရားတွေမို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ် ဆိုတဲ့ အဝေးသင် ဒဂုံတက္ကသိုလ် တက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကို ပြန်လည် ပုံဖော်ကြည့်မိတယ်…
တစ်ခါတုန်းက တို့များရဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဆီပေါ့လေ………..
ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဝတ္ထုစာအုပ်တွေ တော်တော်များများ ဖတ်နိုင်နေပါပီ… တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ နာမည်နာမရဲ့ အနောက်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်၊ ကန်ဘောင်၊ အင်းလျားကန်၊ တံတားဖြူ၊ စိန်ပန်းပြာ၊ အဓိပတိလမ်းမကြီး၊ သစ်ပုပ်ပင်၊ ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာ……. အိုး ရင်ခုန်ဖွယ်အတိပီးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဘဝပေါ့လေ… ကြိုပီး စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေမိခဲ့တာပါ……
အိပ်မက်တွေထဲမှာတော့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေ ကိုင်တဲ့ တီစကွဲယားကြီးကို ကိုင်လို့ ဗိသုကာဖြစ်ချင်တဲ့ပိုးက တော်တော်လေး အားကောင်းနေပါတယ်… ငါ တက္ကသိုလ်တက်ရမယ်ဆို အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်.. အဲ့တာမှ မရရင်တော့ ဒေးတက်ပီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝ လှလှပပ ကဲမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပေါ့………
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းတွေ ထွက်ပီဆိုတဲ့အချိန်မှာ မနက် ၄ နာရီထိုးလောက်ကြီး အမေက လာနှိုးတယ်. အဖေနဲ့ မောင်လေးကတော့
စက်ဘီးနဲ့ ကျောင်းကို အရင်သွားနှင့်ပီ.. ကျမကတော့ အမေနဲ့အတူတူ နှင်းတောကြီးထဲ ချမ်းချမ်းစီးစီး လမ်းလျှောက်ပီး အောင်စာရင်းသွားကြည့်ပါတယ်… တစ်လမ်းလုံး အောင်စာရင်းသွားကြည့်တဲ့ လူတွေ လူတွေ… တချို့က တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် တချို့တွေက ဆူဆူညံညံ.. အောင်စာရင်း ကြည့်ပီး ပြန်လာတဲ့သူတချို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အော်ဟစ်သံ.. ကျရှုံးတဲ့သူတွေရဲ့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဝမ်းနည်းသံတွေကြားမှာ ကျမရင်တွေ ခုန်နေမိပီ…
ရုတ်တရက် လမ်းတစ်ဝက်အရောက်မှာ စက်ဘီးကို အမောတကောနင်းလာတဲ့ အဖေနဲ့ မောင်လေးကို ရုတ်တရက်မြင်တော့ ကျမနဲ့ အမေနဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ရပ်သွားပီး ကျမက အမေ့နောက်ကျောကို အသာပြေးကပ်မိတယ်.. တကယ်လို့များ ခြေချော်လက်ချော်ဆိုတာများဖြစ်ရင် အိမ်ကို တိတ်တိတ်လေးပြန်ပီး အိပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေါ့… ဟိဟိ
‘သမီး အောင်တယ် သမီး အောင်တယ်… မြန်မာစာဂုဏ်ထူးလဲ ပါတယ် သိလား..’
အဖေ့ရဲ့ ဝမ်းသာအားရလေသံအောက်မှာ ကျမလဲ အော်ဟစ်မြူးတူးပစ်လိုက်တယ်… အိုး ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ… အဖေ့ရဲ့ စက်ဘီးနောက်ခုံမှာ ထိုင်နေတဲ့ မောင်လေးကို တွန်းချလိုက်ပီး ‘အဖေ အဖေ သမီးကို တင်နင်း… အောင်စာရင်း သွားကြည့်မယ်’ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတဲ့ ကျမကို အဖေက နောက်တစ်ခေါက် စက်ဘီးပေါ်တင်နင်းပီး ကျောင်းကို ထပ်သွားပေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ အဖေ တအားမောနေပီ……
တစ်လမ်းလုံး ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာထက် ကျမမျက်နှာမှာ အပြုံးတွေချည်း ရှိနေပါတယ်… တွေ့တဲ့လူတိုင်းကို နှုတ်ဆက်.. ကြွားဝါ.. ပျော်ရွှင်နေမိတာလေ.. ကျမတို့ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့ နှစ်က ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပါ.. ၈၈ အရေးအခင်းမှာ ၄ နှစ်သမီးပဲ ရှိသေးတဲ့ ကျမတို့ ဂျူနီယာ သူငယ်တန်းတွေနဲ့ တစ်နှစ်အောက်လိုက်ရတဲ့ စီနီယာ သူငယ်တန်းတွေ ပေါင်းပီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်ဟာ အောင်ချက်အများဆုံး.. ဂုဏ်ထူးရ အများဆုံးနှစ်ပါ.. ကျမတို့ အထက ၄ ကျောင်း တစ်ခုတည်းမှာတင် ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးထွက်တဲ့သူ လေးဘာသာ သုံးဘာသာ နှစ်ဘာသာ တစ်ဘာသာနဲ့ အောင်ချက် ရာနှုန်း အများဆုံး.. ကိုယ်တွေက ဆရာကောင်တွေပေါ့လို့.. အဲ့လို မာန်တက်ပစ်လိုက်တာပါ…
ပျော်ရွှင်စရာ အဖြူအစိမ်း ကျောင်းသူဘဝရဲ့ အဆုံးသတ် … ဘဝကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် ကိုယ်လျှောက်ရမယ့် လမ်းကြောင်းကို ရွေးနိုင်တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ကျမ အောင်နိုင်ခဲ့ပီလေ… အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အဲ့လိုအတွေးမျိုးနဲ့ ပျော်မြူးနေခဲ့ပါတယ်..
လမ်းတစ်လမ်းလုံးမှာလဲ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့သူက ကိုယ်နဲ့ လမ်းထိပ်က ကောင်မလေး နှစ်ယောက်တည်း.. သူမက ရိုးရိုးအောင်ပီး ကျမက စာစီစာကုံးကွန့်နိုင်လို့ ဂုဏ်ထူးမှတ် ထွက်နိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ တစ်နည်း ပြောရရင် မျက်နှာကြီးမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပီ.. အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းက ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း ပျော်ရပါတယ်.. ဟိုက သည်က မုန့်ဖိုးပေးတာတွေ ဆယ်တန်းအောင်တယ် ဆိုတာနဲ့တင် အိမ်မှာ မျက်နှာသာ ရနေပီ…
ဆယ်တန်းအမှတ်စာရင်းတွေ ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ ကျမ မော်ကြွားနေပါပီ.. ကျန်တဲ့ ဘာသာတွဲတွေ ကလဲ အမှတ်က မတိမ်းမယိမ်းလေးတွေဆိုတော့ ဘာသာတွဲ ငါးခုပေါင်း အမှတ်က အဲ့ဒီအချိန် GTC စ ခေတ်စားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ဂျီတီစီအမှတ်ကို ပွတ်ကာသီကာ မှီတဲ့အခါမှာတော့ အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်ပီဆိုပီး ဝမ်းသာနေမိတယ်.. ဒါပေမဲ့ ထင်သလိုမဖြစ်တတ်တဲ့ လောကကြီးမှာ မထင်ထားတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့သရုပ်ပြပါတော့တယ်…
မေဂျာတွဲတွေ ရွေးဖို့အတွက် စာအိတ်ကြီး ရှေ့ချပီး ကျမရယ် မမဆုမွန်ရယ် အဖေရယ် ဘယ်တက္ကသိုလ်ကို တက်မလဲဆိုတာကို ရွေးကြပါတော့တယ်.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ အဖေက ဝန်ထမ်းပါ.. သက်ပြည့်ပင်စင်ဆိုတာထက် လုပ်သက်ပင်စင်ယူဖို့ ပြင်နေတဲ့ အဖေ့မှာ ကျမကို နေ့ကျောင်းထားဖို့ အားမရှိတော့ပါဘူး… သားသမီးတွေ များပီး ဝန်ထမ်းလစာလေးနဲ့ မလုံလောက်တဲ့ အခြေအနေမှာ ကျမတို့ မောင်နှမတွေကို ကျောင်းထားပေးနိုင်တာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေရတဲ့အချိန် ကျမကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်ဆိုတာ ထားဖို့ ဘယ်မလဲ လုံလောက်တဲ့ ငွေကြေး………….
အဖေက ‘အဖေ ပင်စင်ယူလိုက်ရင် ငါ့သမီးလေး စာသင်နှစ် တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်သွားမှာ စိုးတယ်တဲ့’ အမကတော့ ‘သူ ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘဲ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်မယ်တဲ့’ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို တွက်ဆလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျမရဲ့ အိပ်မက်တွေ လဲပြိုသွားပါတယ်…. အဲ့ဒီ မေဂျာတွဲတွေ လျှောက်ဖို့ စာအိတ်ကြီးကို ခုံပေါ်မှာ ပစ်တင်လိုက်ပီး ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ပြားသွားတဲ့အခါ ညတိုင်း မျက်ရည်တွေနဲ့ အိပ်ရာဝင်ရပါတယ်.. အဖေရော အမရော မိသားစုတစ်ခုလုံး ကျမအတွက် အဖြေမထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး………..
‘အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ပဲ တက်လိုက်ပေါ့.. အဲ့ဒီကနေ ဘွဲ့ရလို့ နောက် ကိုယ် အဆင်ပြေတဲ့အခါ သင်တန်းတွေ ဒီဂရီတွေ ဘွဲ့တွေ ထပ်ယူချင်ရင် ရတာပဲလေ နော်’ ဆိုတဲ့ အမေ့ရဲ့ အားပေးစကား အဆုံးမှာ ကျမ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်…. အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘယ်မေဂျာလျှောက်မလဲ ရွေးတော့ ကျမ ရင်မခုန်တော့ပါဘူး.. ‘စီးပွားရေးမေဂျာက အမှတ်မြင့်မယ် ထင်တာပဲ စီးပွားရေးလျှောက်ပေါ့.. စီးပွားရေးဘွဲ့ဆို အလုပ်အကိုင် မရှားဘူးပေါ့’ ဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်တွေကြားမှာ ကျမ အဝေးသင်ကို စီးပွားရေးမေဂျာတွဲ လျှောက်လိုက်ပါတယ်….
အဖေနဲ့အတူ စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင် သထုံလမ်းမှာ မေဂျာတွဲတင်ဖို့ စာအိတ်သွားပို့ရတဲ့အခါ နေ့ကျောင်းဘက်မှာ လူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေပီး အဝေးသင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ လူက ခပ်နည်းနည်းနဲ့ ချောင်ကျကျ အခန်းလေးဘေးမှာ စာအိတ်ကို ပေးလိုက်ပါတယ်.. ခြေလှမ်းတွေကို လှမ်းတဲ့အခါတိုင်း မကျေနပ်တဲ့စိတ်အခံတွေနဲ့ ဖနောင့်နဲ့ မြေကြီးကို ခပ်နာနာဆောင့်ပီး လမ်းလျှောက်တတ်တာ အကျင့်ဖြစ်သွားမိတဲ့အထိ ခပ်ဆောင့်ဆောင့် လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပေါ့….
ကိုယ် ဘယ်ဘာသာရပ်ရသလဲ ကြည့်လို့ရပီဆိုလို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကို အသွားမှာတော့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှာ စီးပွားရေးမေဂျာဆိုတာ ပေါလိုက်တာ ပေါချင်းသောချင်း လျှောက်တဲ့သူတိုင်း စီးပွားရေးမေဂျာရလို့ နင်ဘာလဲ ငါဘာလဲ မေးလိုက်ရင် ဟိုက Eco ဒီက Eco နဲ့ လူက ငိုချင်သလိုလို ရီချင်သလိုလိုဖြစ်သွားမိတယ်.. အဲ့ဒီနှစ်က အထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ စီးပွားရေးတွေ များလွန်းလို့ စီးပွားရေးမေဂျာကနေ သိပ္ပံတွဲကို ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ လမ်းဖွင့်ပေးတော့ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တဲ့အခါ အဖေ့ကို
‘Eco ဆိုတာကလဲ အဖေရယ် ခလုတ်တိုက်ရင် အမလေး တ စရာ မလိုလောက်အောင်ကို Eco တွေချည်းပဲ… သမီး Physics ဖြစ်ဖြစ် Math ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလျှောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါ’
ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး… အဲ့ဒီတစ်ခါပဲ အဖေ့ကို စိတ်နာဖူးပါတယ်.. ကျမ အဖေ့ကို သိပ်ချစ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီတစ်ခါလေးပဲ အဖေ့ကို မုန်းဖူးပါတယ်… ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ တကယ်လို့သာ ငါသာ ဂျီတီစီတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သည့်ပြင် မေဂျာယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် ယူခဲ့မိရင် အခုလိုမျိုး အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အလုပ်လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တွေးမိရင် အဖေ့ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်.. အဖေ့ကို စိတ်ထဲကနေ ပြန်တောင်းပန်မိပါတယ်…
မလိုချင်တာတွေချည်း ရတဲ့အခါ လူက သိပ်ပီး စိတ်ကူးတွေ မရွှင်လန်းတော့ပါဘူး.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲ ဘယ်သူနဲ့မှ မဆုံအောင် တမင်နေခဲ့မိတယ်.. ဆုံမိရင် နင်တို့ ဘာတက်လဲ ငါက ဘာတက်မှာ ဆိုတာမျိုး မပြောချင်လို့လေ…
အဲ့ဒီအချိန်မှာ သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်မိတာက ပညာရေးတက္ကသိုလ် လျှောက်ဖို့ ခေါ်တာပါ.. ‘ဟုတ်ပီ ငါ ကျောင်းဆရာမပဲ လုပ်မယ်.. ကျောင်းဆရာမ လုပ်ပီး ဟိုး တောကြိုအုံကြားကိုသွားမယ်.. အဲ့ဒီက ကလေးတွေကို စာသင်မယ်.. အဲ့ဒီမှာပဲ သွားနေမယ်.. အိမ်မှာ မနေချင်တော့ဘူး’လို့ တွေးမိတဲ့အခါ အဖေ့ကို အဲ့ဒီသတင်းစာ ပြလိုက်ပါတယ်..
အဖေနဲ့ အမေက ကျောင်းဆရာမဆိုတာ ဂုဏ်လဲရှိတယ် ကျက်သရေလဲ ရှိတယ်.. သမီးလုပ်ချင်ရင် လျှောက်ပေါ့လို့ ခွင့်ပြုတဲ့အခါ မဆိုင်းမတွပဲ လျှောက်လွှာတင်လိုက်ပါတယ်… အရင်ဆုံး နှုတ်ဖြေ ဖြေပါတယ်.. တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ပထမဆုံးအကြိမ် စာမေးပွဲ ကျပါတယ်.. ညီအစ်မနှစ်ယောက် အောင်စာရင်းသွားကြည့်ပီး အူလည်လည်မျက်နှာပေးနဲ့ ပြန်လာရတယ်.. လမ်းမှာ ငိုချင်နေတဲ့အသံနဲ့
‘အေးဟယ် ကျောင်းဆရာမ လုပ်ပါ့မယ်ဆိုတော့လဲ နှုတ်ဖြေမှာတင် ကျတယ်ဆိုတော့ ငါ့ဘဝတော့ ဆုံးပီပေါ့’
မမက ‘နင် စဉ်းစားဟ တကယ်လို့ ဆရာမလုပ်ရမယ်ဆို နင် တစ်သက်လုံး အဖြူအစိမ်းချည်း ဝတ်ရမှာ.. ဘာဖြစ်လဲ အဝေးသင်လဲ
တက္ကသိုလ်ပဲ… အဝေးသင်ပဲ တက်တော့.. ဘာပဲပြောပြော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူပဲ လုပ်တော့’ ဆိုပီး အားပေးတာနဲ့ တပ်ပြန်ခေါက်လာကြပါတယ်..
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်မဟာကြီးပါ… တစ်ဆောင်နဲ့ တစ်ဆောင်ကလဲ အဝေးကြီးပါ.. အဆောင်တွေကြားမှာ ထင်းရှုးပင်တွေ အော်ရေးရှားပင် မလေးရှားပင်တွေရဲ့ ရိုးတိုးရိပ်တိတ် အပင်ရိပ်အောက်ကနေ နေပူပူ ဖုန်ထူထူနဲ့ တကယ့်ကို ကဗျာဆန်ပါတယ် လှပပါတယ်.. ဘေးနားတစ်ခွင်က လယ်ကွင်းတွေပါ..
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိကရ အထင်ကရ အမှတ်အသားကတော့ နဝတပတ္တမြားကြီးကို ပုံစံတူလုပ်ထားတဲ့ ကျောက်ခဲနီနီရဲရဲကြီးကို
ရေပန်းနဲ့ ဝန်းရံထားပီး လှေကားအဆင့်ဆင့် အဝိုင်းပုံကျောက်ကွန်ကရစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးပါ… အဲ့တာကို ခေါ်တာက ပတ္တမြားအဝိုင်းပါ.. အဲ့ဒီရဲ့ အရှေ့မှာတော့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်အကြောင်း မော်ကွန်းထိုးထားတဲ့ ကျောက်ချပ်ကြီး ရှိပါတယ်… အဲ့ဒီနေရာတွေက ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားတွေအတွက် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံအရိုက်အများဆုံး နေရာပါပဲ.. အဲ့ဒီနေရာမှာ ဓာတ်ပုံဆရာ အများစု နေပါတယ်.. ကျောင်းသူတွေ နေပူကျဲကျဲထဲ အလှပြ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်..
နောက်ထပ် အထင်ကရ နေရာတစ်ခုကတော့ ကွန်ဗိုကေးရှင်းပါ.. ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမပါ… အဲ့ဒီနေရာမှာလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်.. ကွန်ဗိုကေးရှင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားမှုကတော့ စာသင်ဆောင်တွေနဲ့ အတန်ငယ်လှမ်းတဲ့အပြင် ကွန်ဗိုရဲ့အနောက်မှာ သင်္ချာတွက်တဲ့ဝိုင်းတွေ ရှိပါတယ်.. ချစ်သူတွေ တွတ်ထိုးလေ့ရှိတဲ့ နေရာလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. နေပူလွန်းလို့ ဘယ်မှ မသွားချင်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် ကွန်းခိုပျော်ပါးရာ ပျော်ပွဲစား နေရာလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဌာနမှုးတွေ မော်ကွန်းထိန်းတွေ သင်္ချာတွက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို လိုက်ဖမ်းရာ နေရာလဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဆိုပီး လိုင်းကားတွေလဲ ပြေးဆွဲပါတယ်.. ကျောင်းဖယ်ရီဝင်းကလဲ အကြီးကြီးပါပဲ.. ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန်ဆို ဖယ်ရီကားတွေနဲ့ တပျော်တပါးကြီး ပြန်ရတာကိုက ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တစ်ခုပေါ့… မနက် ကျောင်းတက်ချိန်ဆို ကြိုက်တဲ့ ဖယ်ရီကား တက်စီးပီး ကျောင်းကိုလာလို့ရသလို ညနေလဲ ဖယ်ရီကားတွေနဲ့ ပြန်လို့ရပါတယ်.. ကျမကတော့ အိမ်နဲ့ ကျောင်းနဲ့ နီးတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်.. လိုင်းကားပဲစီးစီး ကျောင်းကားပဲစီးစီးပေါ့….
ပထမနှစ် အဝေးသင် တက္ကသိုလ် စီးပွားရေးမေဂျာအတွက် အနီးကပ် ၁၀ ရက် စပါပီ.. ကျောင်းစတက်ရတော့မယ့်နေ့မှာ ရင်တွေကလဲ ခုန်.. အပျိုကြီးစလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ သနပ်ခါးအဖွေးသားလိမ်းပီး ကိုယ်က ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မဆက်သွယ်တော့ ဘယ်သူ ဘာတက်လဲဆိုတာတောင် မသိရတဲ့အဖြစ်.. အဲ့ဒီတော့ သူငယ်ချင်းလဲမရှိ.. အဖော်လဲ မရှိ… မမကြီးလက်ကို ဆွဲပီး ငါ့ကို အတန်းလိုက်ရှာပေးနော်.. ငါ့ဘေးမှာ နေနော် ဆိုပီး မူကြိုတက်တော့မယ့် ကလေးလိုပဲ အမလက်ကို မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ထားမိတယ်..
ကျောင်း ဘယ်နေ့ စတက်ရသလဲဆိုတာတော့ မေ့သွားပါပီ… ဒါပေမဲ့ အမှတ်ရတာကတော့ လူတွေ လူတွေ အများကြီးပါ.. ကော်ရစ်ဒါတာတွေ အခန်းထောင့်တွေမှာ.. ကျောင်းဆောင်တွေကလဲ အများကြီး.. လူတွေကလဲ အများကြီး.. ကျောင်းကားတွေ အများကြီး… စားသောက်ဖို့ နေရာဆိုတဲ့ ကင်တင်းန်တွေကလဲ အများကြီး.. အားလုံးကို လိုက်ကြည့်ပီး ကျမ တကယ်ကြောက်မိတာပါ.. .. မမ လက်ကို တအားညှစ်ထားပီး ကလေးတစ်ယောက် မူကြိုတက်ရင် အော်ငိုချင်သလို ဖြစ်လာမိတယ်..
ကျမတို့ စီးပွားရေးမေဂျာအတွက်က သုံးထပ်ဆောင် နှစ်ဆောင် အပြင်ကို သီရေတာတစ်ခုကိုပါ စီးပွားရေးအဆောင်လုပ်ထားရတဲ့အထိ လူစည်ပါတယ်…
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီး ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်လာပါပီ….
အဲ့ဒီ တစ်ရက်ပါပဲ နောက်နေ့မှာတော့ ကျမ အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံပါပီ.. ကိုယ့်လူတွေ စုမိပီဆိုတော့ လူက ပြန်ပီး အရင်လို ဆောင့်ကြွားကြွား ဖြစ်လာပါတော့တယ်.. ကျမတို့ ကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန် မမတို့လဲ ကျောင်းတက်နေရတုန်း ဆိုတော့ မမတို့ အဆောင်ကို ကူးလိုက် ကိုယ့်အဆောင်ပေါ် တက်လိုက်နဲ့ လူတွင်ကျယ် ဖြစ်နေပါပီ….နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတချို့က အနီးကပ် ၁၀ ရက်ကျမှ ကျူရှင်ယူတဲ့အခါမှာ ကျမက ကျူရှင်မယူပါဘူး.. ကျူရှင်မတက် ဖြစ်တဲ့အတွက် တချို့ရက်တွေမှာ ကျောင်းကိုသာ လာရတယ် သူငယ်ချင်းတွေ မရှိတော့ ဘေးက လူတွေကိုလဲ သူငယ်ချင်းအဖြစ် မပေါင်းချင်ပါဘူး.. ကျမက တစ်ယောက်တည်း နေရတာ ပိုသဘောကျပါတယ်..
ကျောပိုးအိတ်ကိုလွယ် တစ်ယောက်တည်း ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံး အနှံ့ လျှောက်သွား တစ်နေရာ မဟုတ် တစ်နေရာမှာတော့ အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်တွေ့ပါတယ်.. သူတို့ အဆောင်တွေကို သွားလည်.. ရေဘူး တစ်ဘူး ကိုင်ပီး လျှောက်သွား မောရင် ကိုယ့်အဆောင်ကို ပြန်လာ.. ကျောင်းဆင်းချိန် မတိုင်ခင် အိမ်ကိုပြန်.. ဒါမှမဟုတ် စာသင်နေတဲ့ အခန်းတွေရဲ့ ရှေ့မှာ ယောင်ပေပေ သွားရပ်ပီး. ခပ်တည်တည်နဲ့ အတန်းထဲက ကောင်လေးတွေရော ကောင်မလေး တွေရော အားလုံးကို လိုက်ရှိတ်ပါတယ် … ဟိဟိ ဒါပေမဲ့ လှတပတလေးတွေထက် ပေစုတ်စုတ် ဖုန်အလိမ်းလိမ်း ချွေးတဒီးဒီးကျနေတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေချည်းပါပဲ…
ဒါမှမဟုတ် သုံးထပ်ဆောင်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်က ဝရန်တာမှာ ရပ်ပီး ကျောင်းဆောင်ရှေ့ လမ်းပေါ်က လူတွေကို ထိုင်ငေးပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေ စုမိလို့ ကင်တင်းန်မှာ ထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါလားပဲ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ နာမည်ကျော် စိုးမြင့်ကြော်ကို စားဖူးပါတယ်..ဦးစိုးမြင့်ကြော်ဆိုတော့ ဘာများလဲ မှတ်တယ်.. ထမင်းပေါင်းလိုမျိုး ထမင်းဖြူပေါ်ကို အသီးအရွက်နဲ့ အသားရောကြော်ထားတာကို ဖြူးပေးတဲ့ဟာပါ.. နာမည်ကြီးဟင်းပါ..
ကျမကတော့ ကင်တင်းန်ထိုင်တယ်ဆိုရင်.. ကိုယ့်တစ်ယောက်စာ မုန့်ဖိုးနဲ့ ကားခပဲ ပါတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေကို မုန့်မကျွေးနိုင်လို့ ရှက်တဲ့စိတ်နဲ့ သူတို့ သွားစားရင်တောင် ငါ မဆာဘူး မလိုက်တော့ဘူးဟာ ဆိုပီး တစ်ယောက်တည်း လျှောက်သွားတာ အကျင့်ဖြစ်သွားမိတယ်.. တကယ်လို့ မတတ်သာလို့ လိုက်ရရင်တောင် ဘယ်လောက် ဗိုက်ဆာဆာ ကော်ဖီမစ်တစ်ခွက် တစ်ခါတလေလဲ ရေပဲ သောက်ပီး သူများက ကိုယ့်အတွက် ရှင်းရရင်တောင် အပန်းမကြီးလောက်တဲ့ အဖိုးနှုန်းလောက်ကိုပဲ တွက်ချက်ပီး စားပါတယ်…. အဲ့ဒီအတွက် အကျိုးဆက်က သိမ်ငယ်မိတာပါ.. တော်ရုံဆို လူထူထူ အပေါင်းအသင်းစုစု တကယ် မပေါင်းချင်တော့တဲ့အထိပါပဲ..
ပထမဆုံး ရင်ခုန်စရာ ကျောင်းသူဘဝ ရည်းစားစကားအပြောခံရတာကို သတိရမိသေးတယ်.. မနက် အစောကြီး ကျောင်းကို ရောက်တော့ ဝရန်တာမှာ ရပ်နေပီး အဆောင်ရှေ့လမ်းမှာ လျှောက်သွားတဲ့ လူတွေကို လိုက်ငေးနေရင်း ဘေးနားမှာ ကောင်လေးနှစ်ကောင် လာရပ်လို့ မော့ကြည့်တော့ ရေတိုက်ပါတဲ့.. လက်ထဲက ရေဘူးကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့ ဘာလုပ်ဖို့လဲ ဆိုတော့ ရည်းစားမရှိဘူး ဆိုရင် ရည်းစားဖြစ်ချင်လို့တဲ့ ဟေ ဆိုတဲ့ အာမေဋိတ်သံ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာတော့ အဲ့ကောင်လေးနှစ်ကောင်လဲ လန့်ပီး ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်.. လူက အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ကျန်ခဲ့ပီး သေဟဲ့ လို့သာ အော်ရယ်မိပါသေးတယ်.. အမှတ်တရတွေထဲက အမှတ်တရ တစ်ခုပါ…ဟီးဟီး
နေပူပူ ဖုန်ထူထူကြားမှာ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကြီးက ပျော်စရာမကောင်းလှပါဘူး.. ကျမကိုယ်တိုင်ကလဲ မပျော်တာဖြစ်မှာပါ…. ပထမနှစ် အနီးကပ် ဆယ်ရက်ပီးတော့ စာမေးပွဲ ဖြေရပါတော့တယ်… စီးပွားရေး မေဂျာက လူအရမ်းများလို့ နှစ်သုတ်ခွဲပီး အပြင်က စတိတ်ကျောင်းတွေမှာ စာမေးပွဲဖြေရပါတယ်… ပထမဆုံးအကြိမ် ဘာဂျာခေါက်တွေနဲ့ စာမေးပွဲခိုးချတဲ့ အတွေ့အကြုံကို တက္ကသိုလ်ရောက်တော့မှ ကြုံရပါတော့တယ်…
ပထမနှစ်အပီး ဒုတိယနှစ် တက်ဖို့ ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျမ အလုပ်ဝင်လုပ်နေရပါပီ.. သီရိမင်္ဂလာဈေး အပေါ်ထပ် Nikko ထီးစက်ရုံမှာပါ.. အဝင်အထွက် ထီးစာရင်းတွေကို မှတ်တဲ့ စာရင်းကိုင်အနေနဲ့ ကျမ အလုပ်ရပါတယ်.. ပထမဆုံးအကြိမ် အလုပ်စလုပ်တဲ့အချိန် ကျမအသက် ၁၈ နှစ်တောင် မပြည့်သေးပါဘူး…. မနက် ၈ နာရီ အလုပ်ခွင်ဝင်နိုင်ဖို့ ကျမ အလုပ်ကိုသွားရတဲ့အချိန်က မနက် ၆း၃၀ ပါ.. အဲ့ဒီအချိန် ကျမသူငယ်ချင်းတွေက ဂျီတီစီ မှော်ဘီကိုသွားဖို့ ကျောင်းဖယ်ရီကားကို စောင့်တဲ့အချိန်နဲ့ ကွက်တိပါပဲ.. သူတို့က ကားလမ်း တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ ကျောင်းသွားဖို့ ဖယ်ရီစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျမက အလုပ်ကိုအသွား ၄၉ ဒိုင်နာကားကို တိုးစီးဖို့ ကားလမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းမှာ စက်ရုံယူနီဖောင်း အပြာရောင်လေးကို ဝတ်ပီး ရပ်စောင့်နေရတဲ့ အချိန်တွေဟာ ကျမအတွက်တော့ မမေ့နိုင်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေပါ.. တစ်ခါတလေ ကျမကို လှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အပြုံးတွေကို ကျမ လျစ်လျူရှုပေါင်းများလာတဲ့အခါ သူတို့ ကျမကို မနှုတ်ဆက်ကြတော့ပါဘူး.. ဘယ်လိုပဲ ကိုယ့်စိတ်ကို ဖြေဖြေ ကျမ ကြေကွဲရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီစက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ကျမအတွက် သူငယ်ချင်း ကောင်းတွေ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရရှိခဲ့ဖူးတာကိုတော့ မမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး…
ဒုတိယနှစ် ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လူရည်လည်စ ပြုလာပါပီ.. ကျူရှင်ကို အပြင်မှာယူတာနဲ့ ဝိုင်းယူတာ သိပ်မကွာဘူးလို့ ကျမသူငယ်ချင်းက ပြောတာနဲ့ ကျမတို့ လူစုပီး ဝိုင်းကျူရှင်ယူပါတယ်.. ဆယ်တန်းတုန်းကတောင် ဝိုင်းကျူရှင်ဆိုတာ မယူခဲ့သမျှ တက္ကသိုလ်ရောက်မှ ဝိုင်းကျူရှင်ယူရတာနဲ့ ဘာဂျာခေါက်လုပ်ရတာနဲ့ တော်တော်လေး အလုပ်စုံလုပ်ဖူးပါတယ်… ဝိုင်းစုပေးတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ အိမ်မှာ စာသင်ရပါတယ်… ဆရာက ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာလဲ ဖြစ်တော့ ကျမတို့ကို စာသင်နေရင်းနဲ့ ဂစ်တာတီးပြပါတယ်.. သီချင်းဆိုပြပါတယ်.. ကျမတို့ကလဲ အကြိုက်မတွေ့ရှာပါဘူး.. ဆရာက သီချင်းဆို တပည့်တွေက ခုံခေါက်နဲ့ ရဝတရုံးကို တိုင်မယ်ဆိုပီး အိမ်ရှေ့က အပျိုကြီး မမ လုပ်မှပဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စာသင်ရပါတော့တယ် ဟိဟိ
အဲ့ဒီမှာ ကျူရှင်တက်တုန်းက အားလုံးပေါင်း ယောက်ျားလေး ၄ ယောက် မိန်းခလေးက ၃ ယောက်ပါ.. အဲ့ဒီ ခုနစ်ယောက် ပေါင်းမိတော့မှ အနီးကပ် ဆယ်ရက်လဲ ရှေ့ပိုင်းရက်တွေပဲ တက်ပီး ကျန်တဲ့ရက်တွေ ကျူရှင်မတက် ကျောင်းလစ်ကြပါတော့တယ်.. ကျမတို့ သွားလေ့ရှိတဲ့ နေရာတွေကတော့ သာကေတက တိုင်းရင်းသားကျေးရွာပါ. နဝဒေးမှာ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပါတယ်.. တိရစ္ဆာန်ရုံ သွားပါတယ်… ဘုရားအစုံဖူးပါတယ်. ပဲခူးကိုလဲ သွားလိုက်ပါသေးတယ်..
ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတစ်စု အမြဲတမ်းသွားဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ ဝဋ်ကြွေးတော်ပြေဘုရားပါ.. ဝဋ်ကြွေးတော်ပြေ ဘုရားရဲ့ မြစ်ကမ်းနဖူးမှာ ရပ်ပီး မြစ်ပြင်ကို ကြည့်ရတဲ့ ခံစားချက်က လွမ်းမောစရာကောင်းလှတယ်…. မြစ်ပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေအေးအေးက တကယ့်ကို အမောပြေစေပါတယ်.. မြစ်ဆိပ်ကနေ လှေစီးပီး ဟိုဘက် မယ်လမုဘုရားကို သွားဖူးရတာလဲ ပျော်စရာကောင်းတယ်.. လှေက တစ်ခါတစ်လေ စက်တပ်လှေမဟုတ်ဘဲ လက်နဲ့လှော်တဲ့လှေဆို ပိုပီး ငြိမ့်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မယ်လမုနဲ့ ဝဋ်ကြွေးတော်ပြေဘုရားကြားမှာ ဝဲကြီးကြီးရှိပါတယ်.. အဲ့ဒီအတွက် လှေတွေက ဝဲကို ရှောင်ပီး မောင်းရတာများပါတယ်… ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းမှ အကြောက်အလန့်မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး..
အဲ့ဒီ ဒုတိယနှစ်ကတော့ တော်တော်လေးကို လမ်းများတဲ့ အပျော်ဆုံးနှစ်လုိ့ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်.. ကျမတို့ ခုနစ်ယောက်အုပ်စုထဲမှာ အကိုကြီးကြီးတစ်ယောက် ပါပါတယ်.. သူက ကျမတို့ကို တော်တော်လေး ချစ်ပါတယ်.. သူက လက်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်နေတော့ ကျမတို့ကို အကုန်အကျခံပီး မုန့်လည်းကျွေး လမ်းစရိတ်တွေလဲ သူပဲ အကုန်ခံတာများပါတယ်.. ကျမတို့ ပေးမယ်ဆိုလဲ လက်မခံပါဘူး.. သူ့ကို ပြန်လုပ်ပေးရတာကတော့ စာကူးပေးရတာနဲ့ သူ့အတွက် စာရှင်းပြရတာပါ.. တော်တော်လေး ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့အကိုပါ… ဘာပဲပြောပြော သူငယ်ချင်းအုပ်စုတောင့်တောင့်ဆိုတော့ ပထမနှစ်ကထက် ပိုပျော်ပါတယ်… စာမေးပွဲဖြေတော့လဲ အုပ်စုတစ်စုလုံး ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် နီးပါးပါပဲ.. ဒုတိယနှစ်မှာ စာမေးပွဲ အကျများကြပေမဲ့ ကျမတို့ကတော့ တစ်အုပ်စုလုံး အောင်ကြပါတယ်.. ကံပေါ့လေ…..
တတိယနှစ်မှာတော့ နည်းနည်း ကျောင်းကို ခင်တွယ်စပြုလာခဲ့တယ်… တတိယနှစ်မှာ ကျူရှင်ယူတော့ ရှစ်မိုင် Junction 8 နားက မင်းမင်းစတိုးအနောက်မှာပါ.. ဆရာမ ဒေါ်ချယ်ရီဆီမှာ တက်တာပါ.. တိုက်က ခြောက်လွှာလား ခုနစ်လွှာလား မသိပါဘူး.. အပေါ်ဆုံးထပ်ပါ.. အဲ့ဒီကို ရောက်ပီးရင် တော်တော်နဲ့ ပြန်မဆင်းချင်ပါဘူး.. လှေကားထစ်တစ်ဝက်လောက်ရောက်ရင် လျှာက လည်ပင်းပတ်နေပါပီ.. မောလွန်းလို့ပါ
အဲ့ဒီမှာ ကျူရှင်တက်ရတဲ့အတွက် လုပ်တတ်လာတဲ့ နှစ်ခုကတော့ Junction 8 က J Donut မှာ ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်တာနဲ့
နဝဒေးရုပ်ရှင်ရုံမှာ အပတ်တိုင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပါ.. ဂျေဒိုးနပ်မှာ ထိုင်ဖြစ်တာကို ကြွားရတဲ့အကြောင်းက အဲ့ကျူရှင်တက်မှသာ ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်ဖူးတာပါ.. တခါတလေ မင်္ဂလာဒုံအထိပါ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပါတယ်… ကျမတို့ သူငယ်ချင်းအသစ် နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်က မင်္ဂလာဒုံ စစ်တပ်ဝန်းထဲမှာနေပီး တစ်ယောက်ကတော့ ဗိုလ်မှုးသားပါ.. သူက ကျူရှင်လာတာတောင် မှန်အနက်တပ်ထားတဲ့ ကားနဲ့ လာတာပါ.. အဲ့ဒီတော့ ကျမတို့က ကားကပ်စီးခွင့်ရပါတယ်.. အကျိုးဆက်ကတော့ မီးပွိုင့်တွေမှာတောင် အထဲကို မမြင်ရတဲ့အတွက် ပွိုင့်မှာစောင့်နေတဲ့ မော်တော်ပီကယ်တွေက ကျမတို့ကို တစ်ခါတလေ အလေးပြုပါတယ်… ဟဲဟဲ အဲ့လို တန်ခိုးထွားခဲ့တာပေါ့…
တတိယနှစ်မှာတော့ ကျမ ခေါင်းဆောင်ပီး ကျူရှင်တက်ရတဲ့ နေ့တိုင်းနီးပါးလောက် လျှောက်သွားပါတယ်.. အဲ့ဒီမှာ ဟိုးအရင် ဝတ္ထုဖတ်ခွင့်ရတုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကန်ဘောင်တို့ အင်းလျားကန်ဆိုတာတွေကိုလဲ ရှစ်မိုင်ကနေဆိုတော့ နီးနေပီဖြစ်တော့ ရောက်ဖူးတယ်ရှိအောင် သွားဖြစ်ပါသေးတယ်.. အော် အခုအချိန်အထိ ဗီဒီယိုထဲမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ ဇာတ်ဆို ကန်ဘောင်က စားသောက်တန်းတွေမှာ ရိုက်တာပါလားဆိုတဲ့ အသိမျိုးနဲ့ပေါ့… ကန်ဘောင်ကတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ အများဆုံးရှိတဲ့ နေရာပါပဲ.. ကိုယ်တွေတော့ တစ်ခါမှ လက်ချင်းချိတ် လျှောက်ခွင့်မကြုံခဲ့ဖူးပါဘူး …ဟိဟိ
အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ အဖေက ပင်စင်ယူပီး အပြင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အပြင် ကျမကလဲ အဲ့ဒီထီးစက်ရုံမှာ လုပ်တာ အနေကြာလာတော့ ခွင့်တွေ လစာတွေ တိုးလာတဲ့အပြင် အိမ်စီးပွားရေးကလဲ အနည်းငယ် အဆင်ပြေနေပါပီ.. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်တောင် ကိုယ်က တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်လောက်ကျလဲ ဆိုပီး ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေ ရောက်လာတဲ့အတွက် နည်းနည်းတော့ လူငယ်ဆန်ဆန် အပူအပင်မရှိ ပျော်မြူးလာနိုင်ပါတယ်… ကျမအတွက် ကံကောင်းတာက ကိုယ်က သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းခင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ကျမကို တော်တော်လေး ခင်မင်ကြတာပါပဲ.. တချို့ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စကလွဲလို့ပေါ့… သူတို့ကလဲ ဘာကြောင့်မှန်းကို မသိတာပါ.. နှစ်ယောက်တည်းဆို အသေခင်ပီး လူစုံပီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေကို ဖော်တာပါ.. ဘာအကျင့်မှန်းကို မသိတာပါ.. အခုတော့လဲ အဆက်အသွယ် ပြတ်နေပါပီ…
တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက အနီးကပ် ဆယ်ရက်၊ သုံးနှစ် အတွက် ပေါင်း ရက်သုံးဆယ်၊ စာမေးပွဲ ဖြေခဲ့ရတဲ့ရက်တွေနဲ့ ပေါင်းရင် တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သင်တန်းရက်တိုတစ်ခု တက်ခဲ့ရသလောက် အချိန်လေးပါပဲ… စာမေးပွဲဆိုလဲ တက္ကသိုလ်အဆင့်မဟုတ်ဘဲ အပြင် အထက်တန်းကျောင်းတွေ အလယ်တန်းကျောင်းတွေ မူလတန်းကျောင်းတွေမှာ ဖြေရပီး ဖြေခွင့်ရဖို့ကိုလဲ ပိုက်ဆံနဲ့ထပ်ပီး ဖြေခဲ့ရတယ်.. ကံကောင်းတာကတော့ နှစ်တိုင်း အောင်ခဲ့တာပါပဲ…
၂၀၀၄-၂၀၀၅ ပညာသင်နှစ်မှာ ဘွဲ့ယူတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ခါမှ ခြေမချဖူးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာ ဘွဲ့ယူခွင့်ရပါတော့တယ်.. အဲ့ဒီကျမှပဲ သစ်ပုပ်ပင်၊ ဂျပ်ဆင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးရှေ့မှာ အပြိုင်အဆိုင် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခွင့် ရခဲ့ပါတော့တယ်…. ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမစတိတ်ခ်ျစင်ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာပါ.. ရီဟာဇယ်နေ့ကပါ..
သိပ်သိပ်ကိုလှနေတာပါပဲ.. ကမ္ဘာအေးဘုရားရှေ့က မာမီပြင်ပေးတာပါရှင့်… ခွိခွိ
အပေါ်က ပုံကတော့ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့ကပါ… အိမ်ရှေ့က အမကြီးတွေ ပြင်ပေးတာပါ.. နှုတ်ခမ်းနီကတော့ ဓာတ်ပုံထဲမှာ အထင်းဆုံးပါပဲ.. ပါမောက္ခတောင် ပြုံးသွားပါတယ် ဟိဟိ. သူတို့ပဲ ဆိုးပေးလိုက်တာပါ.. ကိုယ်ကတော့ ဘာကိုမှ အထွန့်မတက်ပါဘူး မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်ပါဖို့နဲ့ ဆံထုံး ထုံးလို့ရရင်ပဲ ကျေနပ်နေပါပီ ဟိဟိ....
လူငယ်ဘဝ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝဆိုရင် ပြန်စဉ်းစားရတာ မှေးမှိန်လွန်းလို့ အခု သတိရနေတုန်း အချိန်လေးမှာ မှတ်တမ်းသဘောမျိုး ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်ရေးထားပါတယ်.. နောင်တစ်ချိန်ချိန် ပြန်ဖတ်မိရင် ဟိုးအရင်တုန်းက တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရခဲ့တာ ဒီလိုမျိုးပါဆိုတာကို ပြောပြနိုင်ဖို့ပါပဲ….
(၂၄-၁၀-၂၀၀၉၊ ၁း၃၀ am)
at 11:43 AM Labels: အမှတ်တရ
Yu Ya October 23, 2009 at 6:55 PM
သြော်..အနော်က Nikko မှာအလုပ်ဝင်ခဲ့ဖူးတာကိုး.. ဒါဆိုရင် ဦးရွှေမင်း၊ ဦးကျော်ကျော်ဝင်းတို့ကိုတော့ သိမှာပေါ့နော်။
ahphyulay October 23, 2009 at 9:35 PM
ကျွန်တော် အစအဆုံးလိုက်ဖတ်ပြီး လွမ်းမောဖွယ်၊ကြည်နူးစွတ်ပျန့် ဖွယ်တို့ ကိုရရှိ
ခံစားမိပါတယ်။ တစ်ခါတုံးက တက္ကသိုလ်မှာလို့ တောင်ပေးချင်လာတယ်။ဘဝကို
ကတော့အမြဲတန်းမေ့ ပျောက်လို့ မရနိူင်ကောင်းတဲ့ ရသတွေကိုပဲပေးစွမ်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိူင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါ။အရာရာကို ငွေပေါ်အောင်ရောင်းစားနေတဲ့ 
သူတို့ ခေတ်မှာ အမိတက္ကသိုလ်ကြီးပါမသွားဖို့ ဆုတောင်းမိပါကြောင်းညီမလေးရေ့ ...
jr.လွင်ဦး October 23, 2009 at 11:24 PM
အနော်လေး က ထင်ထားတာထက် ပိုလိမ္မာတယ်။
ဘွဲ့ယူဓါတ်ပုံလေးမှာ ခန့်ချောကြီး။း)
စိမ်း... October 23, 2009 at 11:50 PM
အရင်တုန်းကတော့ မသွားချင်လွန်းလို့... :P
သားကြီး October 24, 2009 at 1:01 AM
သားကြီး October 24, 2009 at 1:11 AM
ကျောင်းဆရာမ မဖြစ်တာက တမျိုးကောင်းတယ်လို့လှည့်တွေးရမယ်
ဘာလိုလို လို့ပြောရတာ အဲဒီနေရာတွေကိုယ်မှမရောက်ဖူးဘဲကိုး
chocothazin October 24, 2009 at 4:38 AM
ဟေ့ ၂၀၀၀ မှာအောင်တာဆိုတော့ တူတူပဲပေါ့။ သယ်ရင်းတွေပေါ့ ဟာဟ။
purplemay October 24, 2009 at 6:08 AM
ရည်းစားစကားပြောခံရတာလေး အားကျလိုက်တာ ခိခိ...။
ခရမ်းတို့လဲ အဲ့လိုပဲ ဒုတိယနှစ်က ပျော်စရာအကောင်းဆုံး...။
ဝက်ဝံလေး October 24, 2009 at 6:58 AM
အယ် အနော်က ညီမထက် အသက်တော်တော်လေးကြီးတာပဲ ဟိဟိ သိဘူးနော် ရွယ်တူမှတ်လို့ ဟားဟားးးး အနော်ဘွဲ့ရတော့ ညီမက ၁၀ တောင်မအောင်သေးဘူး ၁၀ က ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ မှာ အောင်တာ ဟိဟိ သိဘူးနော် သိဘူး
ညီမလဲ အဝေးသင်ပဲ တက်တယ်လေ အနီးကပ် ၁၀ ရက်တောင် သွားမတက်ပါဘူး ဟဲဟဲ ဒီလိုပဲ အောင်လာခဲ့တယ် ဟိဟိ ဘွဲ့မရဘူးနော် ဟွင်းးးးးး လာမမေးနဲ့ ဘိုင် တာ့တာ
တခုထပ်ပြောဦးမယ် ရေတိုက် ဖတ်ရတာ အရှည်ကြီး ဟိဟိ
မြစ်ကျိုးအင်း October 24, 2009 at 9:37 PM
အကိုတို့ ဒုတိယနှစ်မှာ ဒဂုံတက္ကသိုလ် လာလည်သေးတယ်။
ကျော်ကြီးမှာ တက်တော့ ဒဂုံ ကသူငယ်ချင်းတွေပါ ရလာတာလေ...။
အနီးကပ်ကတော့ ယောကျာင်္းလေးတွေ အတွက် ဖဲဝိုင်းနဲ့ ထန်းရည်ဆိုင် ပဲရောက်တာ
သန်လျင်မှာ လာတက်ကြတော့ အကိုက အိမ်ရှင်လေ ထန်းရည်ဆိုင် တွေ ဒိုင်ခံပို့ပေးရတာ
ဒဂုံက သူငယ်ချင်းတွေလည်း အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကို လာကြ ထန်းရည်သောက်ကြနဲ့ တော်တော်ပျော်ခဲ့၇ဖူးတယ်။။
အခုဖတ်နေရင်းနဲ့ တော်တော်များများ သတိရသွားတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့ရတာ မမေ့နိင်စရာပါပဲ
မြစ်ကျိုးအင်း October 24, 2009 at 9:39 PM
ရည်းစားမရှိသေးရင် ရည်းစားဖြစ်ချင်လို့တဲ့ ဗျူဟာက ပြောင်မြှောက်တယ်
ကြားရတဲ့သူ ရင်ခုန်စရာ ကို မရှိတာ...။
မြစ်ကျိုးအင်း October 24, 2009 at 9:40 PM
ပုဝါနဲ့ ဆံထုံးနဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်သူများလည်း ထင်မိသေးတယ် :)
စိတ်၏ဖြေရာ October 25, 2009 at 10:25 AM
အွန်စော October 26, 2009 at 5:02 PM
အော် မဆုမွန်နဲ့ ညီအစ်မတွေလား။ အွန်စောထက်အများကြီးငယ်ပေမဲ့ အသိ၊ဥပဓိက အရန်းရင့်ကျက်နေသလိုပဲနော်။ ချီးကျူးမကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။